आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल माघ ४ गते बिहिबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १८ तारीख माघशुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथी प्रातः ०९ः१९ बजे सम्म पश्चात द्वितीया तिथी चन्द्रमा मकर राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु सोनम ल्होसार , श्री बल्लभ जयन्ति चन्द्र उदय – ज्यो. पं. सरोज घिमिरे
परिवारिक साथ सहयोगमा अधूरा कार्यहरु सम्पादित हुनेछन । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्धि हुनाले मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु होला । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।
अनावश्यक खर्चको सामना गर्नुपर्नेछ । कार्यक्षेत्रको लापरवाहिका कारण सामान्य अपजसको सामना गर्नुपर्ला साथै माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले सजग रहनु होला । बिश्वासिला मित्रहरुबाट धोकाहुन सक्नेछ ।
आय आम्दानिको क्षेत्रमध्यम रहेतापनि स्वास्थ क्षेत्रमा तनाब उत्पन्न हुनेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलाले सताउनेछ । मनमा बिभिन्न कुबिचारले सताउनेछ । बिश्वासिलो ब्यत्तीहरु बाट धोका हुनसक्नेछ ।
ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामान्यकार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । शुभ समाचारको श्रवणले मन प्रशन्न रहला ।
प्रतिश्पर्दिहरु बृद्धिहुनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु पर्नेछ । स्वाथका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । भोग बिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । मान्यजनहरुसगँ सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
कार्य क्षेत्रमा आटँ र शाहसको कमी महसुस हुनेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा कार्य सम्पादित रहनेछन । कलाकौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मित्रजनहरुको मार्ग दर्शनमा आम्दानि मध्यम रहनेछ ।
भौतिक श्रोतसाधनको परिचालनमा सजग रहनु पर्नेछ । मानप्रतिष्ठामा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पारिवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ ।
अरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसरता उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा बृद्धि हुनेछ । तपाइ द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यत्तिहरुलाई प्राप्त रहनेछ ।
अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ । भोज भतेर जन्य कार्यमा सरिक हुने अवसर प्राप्त रहनेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलमा फसिएला । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मान्यजनको साथ सहयोगमा बृद्धिहुने योग रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादित हुने समय रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायमा जिवन साथिको साथ द्वारा मनग्य लाभ प्राप्तहुनेछ । मानप्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यमा त्रुटि देखाउनेको सङ्ख्यामा बृद्धिहुनेछ । खानपनाका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्रामा सजग रहनु होला ।
बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको साथ सहयोगमा आम्दानिको दिघो श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बितीय क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । बाणीमा मधुरता छाउनेछ ।